Indlela ukukhetha concentrator-mpilo ukusetshenziswa ekhaya?
Oxygen concentrators abizwa ngokuthi amadivayisi ezikhethekile osetshenziselwa nokwelashwa wamaphaphu nesifo senhliziyo. Muva nje, imishini kwalesi silwane kungabonwa kuphela izibhedlela. Namuhla, uma ufuna lula ukuthenga kuhlanganise compact-mpilo concentrator ukusetshenziswa ekhaya.
Ngokungafani angaphambilini, amadivayisi enjalo ifakwe yimuphi amasilinda. Oxygen concentrators ukukhiqiza ngokwakho. Yasungulwa ubuchwepheshe, ogxile ukusebenza kwalezi amadivayisi, ngo-1958, i-NASA ochwepheshe, isimiso yokusebenza lamadolobha esimanjemanje-mpilo concentrator oluphakeme elula. Izinsika zombili efakwe ne zeolite ku lwemidlalo. Le into efana uzibuthe edonsela athomu nitrogen nezinye izakhi kufakwe emoyeni, futhi ama-athomu-mpilo ngokukhululekile sihamba. Okungukuthi usebenza njengendlela lemifanekiso. Original eqinisekisiwe Oxygen Concentrators ayatholakala kusukela ummeleli ogunyaziwe we Invacare, Bitmos futhi Philips website at www.mediflex.ru
Izinhlobo ezinkulu Izikhumulo
Buza imibuzo mayelana nendlela ukukhetha concentrator-mpilo ukusetshenziswa ekhaya, kufanele, yebo, banake imingcele yayo eziyisisekelo. imishini yobuchwepheshe yalolu hlobo asetshenziswa izibhedlela, inkulu ngobukhulu futhi umthamo omkhulu. concentrators okunjalo angakhiqiza abafika kwabangu-10 amalitha-mpilo ngehora. onobuhle Domestic babe Ubukhulu ezincane futhi zihlukaniswe amaqembu ezimbili eziyinhloko:
Senzelwe yokwelapha. Lolu hlobo imishini isetshenziswa ukwelapha ezingamahlalakhona ukucinana kwemigudu yokuphefumula, isifuba somoya, zokuphefumula futhi inhliziyo izifo. Ngokuvamile, lezi amadivaysi zisetshenziselwa kusheshiswe yokutakula iziguli nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa. Oxygen ukufakwa lolu hlobo angakhiqiza 5 amalitha ngehora.
Senzelwe ukuvimbela izifo kanye kwezempilo jikelele. Lena zikagesi ezincane kakhulu ukukhiqiza 1-3 amalitha-mpilo ngehora. Isikhathi esining impela lolu hlobo concentrator isetshenziselwa ukulungiselela i-oksijini cocktail.
Isisetshenziswa eyenzelwe-mpilo nemigoqo. onobuhle ezinjalo ukufakwa imfanelo amaqembu, ubuhle salon, izikhungo kwezingane, nokunye. D. Ukusebenza amamodeli we le mikhiqizo ongafinyelela 3-5 amalitha ngehora.
Lolu khetho - futhi into kufanele ukuba unake lapho ekhetha kwemishini yezokwelapha. Oxygen concentrator ngesisekelo salokhu ingase ibhekisele iqembu ephathekayo, ezithathekayo noma umile. Imibuzo eyenza umuntu acabange nemishini ekhethekile unikeza isitoreji ithangi umfutho ophakeme. Ukuyisa lezi onobuhle ayakhelwe futhi ekhaya azisetshenziswa. amadivaysi ephathekayo nesisindo esingaphansi 4.5 kg. Ngakho-ke, kungenziwa wathuthela noma iyiphi indawo evumelana nje ezandleni. concentrators okunjalo kuvame ifakwe i ezizimele ugesi uhlelo futhi ingasetshenziswa emkhakheni. onobuhle Iyazulazula anemisila amasondo okuhlala.
Ngaphezu amandla injongo, ukuthengwa imishini njengomoya-mpilo concentrator ukusetshenziswa ekhaya, qiniseka ukuba banake:
Ubukhulu bayo. Ngaphambi uthenga ihabhu kufanele ichaze indawo yelungiselelo yayo indlu noma indlu. Faka lolu imishini e ubuncane cm 30 kusukela izindonga kanye radiators.
Izinga umsindo. Lokhu ipharamitha kuyinto encike ngqo kwi ipharamitha ezifana amandla kudivayisi. I emikhulu kuba, ihabhu ezinomsindo ngaphezulu. onobuhle Small cishe akukho umsindo. Amadivayisi kukhona naphakathi ngobukhulu kulesi sici kancane kancane elula. Ezimweni eziningi, umsindo onobuhle ukuze isetshenziswe ekhaya, ingeqi 35 dB.
Ochwepheshe ukweluleka uma uthenga labaculi sinake futhi ukuba khona nesisekeli ezinjalo, njengoba amafutha okuthambisa. Ukusebenzisa idivayisi ngaphandle le kwalokho kungaholela ukubukeka kome nolwelwesi lwamafinyila. Futhi ebhokisini kwalesi imishini kumele zihlanganisa esikhundleni acinene cannula, hose nokuhlunga.
I lokuhlushwa i-oksijini
Uma ukhetha imishini kwalesi silwane, phakathi kwezinye izinto, banake izinkomba ezifana okuqukethwe oxygen we esikhishwe ukusakaza. It is kulinganiswa njengoba amaphesenti. onobuhle yamanje angakhiqiza ukusakaza kokuba okuqukethwe oxygen 75 kuya 95%. Izikhumulo Iningi ukushintsha izindlela zokukhiqiza isivinini ukugeleza. Ayanda score, ngokuvamile ngaphansi okuqukethwe oxygen ingxube. Kunoma ikuphi, ochwepheshe ukweluleka hhayi ukuthola i concentrator-mpilo ukuthela 60%. Ukukhiqiza ukwelashwa eliphezulu usebenzisa amadivaysi ezinjalo kuyoba akunakwenzeka.
Yiqiniso, i-choice into enjalo, njengoba concentrator-mpilo ukusetshenziswa ekhaya, qiniseka ukuba banake sha zedivayisi. Phela, indlela izinga kangakanani kuzoncika impilo iziguli. Okwamanje, Russian emakethe imelelwa imishini kuwo wonke amazwe amathathu esikhiqiza: US, Germany kanye China. Izikhumulo German kanye American kuhluke kakhulu quality Yakha, ukuthembeka nokuqina kwayo.
Modern-mpilo concentrators Chinese European ekhatsi eliphansi, kodwa abiza kakhulu. Ububi imishini ekhiqizwa kuleli zwe, Kuyaphawuleka ukuthi, ngokungafani German kanye US, it is hhayi ifakwe uhlelo igesi ukuthola. Ikhwalithi oxygen ezivezwa imodeli Chinese ayikwazanga ukuqinisekiswa.
Uma sikhuluma abakhiqizi eqondile Izikhumulo yasendlini, njengamanje ethandwa kakhulu phakathi abathengi yasekhaya ukujabulela:
Izizinda brand "Armadillo"
Ibanga imikhiqizo ukuthi inkampani Chinese ubanzi kakhulu. Emakethe zinjengethonsi imishini yobuchwepheshe brand sinekhono kufika ku-15 amalitha-mpilo ngehora, futhi mncane impela, esikhiqiza esingaphansi 1 ilitha. Kulula kakhulu eyolanda kuhlanganise aggregate umenzi, ukusetshenziswa ekhaya.
onobuhle Domestic yalesi brand asebenziseka kalula futhi ulungiselele. Kwezinye onobuhle kuhlanganisa eliwusizo njengoba diffuser. Ingasetshenziselwa ukuxuba izinhlobo-mpilo ka ezinamakha amnandi (i-lavender, pine, lemon nokunye. Njll). Empeleni elula futhi kunengqondo-mpilo concentrator ukusetshenziswa ekhaya. Izibuyekezo ngalokhu ezinhle brand futhi ngenxa yezindleko eliphansi imishini. Uma wayefisa, ungakwazi ukuthenga ihabhu sasivumela elinamandla ayizinkulungwane 15-20. Ruble.
Ethandwa kakhulu lezi zimo zezulu zokuzenzela nezinqe ephathekayo ezikhiqizwa yilo inkampani. Lezi izinzuzo ongenambangi zihlanganisa:
isisindo Khanyisa. Lesi sibalo e onobuhle ephathekayo AirSep lingaphansi cishe amabili izikhathi kuka onobuhle ezivamile.
Ukusebenza. Ngisho onobuhle encane kakhulu lokhu brand ungaveza kufike ku 5 amalitha umoya-mpilo.
The kungenzeka usebenzisa for ekwelapheni abantu abane kakhulu wamaphaphu nesifo.
Ukuba khona ugesi i-alarm.
Ngakho, izinga ayive iyinhle, lokhu concentrator umoya-mpilo. umphakeli ngqo imishini ngokuvamile ayithengise ngoba izinkulungwane 100-300. ruble. Ngo onobuhle lokhu wabenza brand kungadla nakakhulu.
Ngaphezu lula ukusetshenziswa, izinzuzo imishini wale nkampani ihlanganisa ukusebenza okuphezulu, kwegezi design organic. Wonke amamodeli we lokhu brand kuthiwa kwahambisana isifutho, LCD Abaqaphi nokulawula panel. Futhi, izinzuzo Izikhumulo umenzi zibandakanya ukuphepha ephelele ukusebenza. Sishukumiseleka Atmung imodeli Chinese ezibizayo, kodwa ushibhile AirSep - ruble ecishe ibe yizinkulungwane 20-50 ..
Usizakale ngaleli ihabhu ukusetshenziswa ekhaya ngokuyinhloko izinga inhlangano. Futhi, izinzuzo zalesi imishini ubhekwa operation ethulile kakhulu. Uma kudingeka, lokhu brand Imishini ingasetshenziswa ubusuku nemini. Ukusakaza emoyeni-mpilo bavunyelwe ulungise njengoba wayefisa ngaphakathi 0.1 litre ngomzuzu. umthengi Good libuyekeza Bitmos imodeli wathola kanye khona e isakhiwo lemifanekiso elwa namagciwane. Ingabe amadivayisi ezithathekayo yalesi brand mayelana efanayo futhi Atmung, - kuze kube ama-ruble ayizigidi 60 ..
Ezinye Takhamuti telive letfu kunalokho eqolo kungase kubonakale onobuhle American noma German hhayi kuphela, kodwa ngisho Chinese. Uma imali enganele, futhi imishini kuyadingeka ngempela, ungase ucabangele ukuthenga imodeli ezazisemizini ukusetshenziswa. Oxygen Concentrator ukusetshenziswa ekhaya b / u kungadla eshibhile kabili imodeli entsha.
Nokwelashwa kwezifo ngu ephefumula umoya-mpilo akuwona umsebenzi kuphela ongenza mishini. I concentrator-mpilo ukusetshenziswa ekhaya Ungase futhi ukulungiselela Cocktails enempilo kakhulu. Lezi iziphuzo enze kube nokwenzeka ukuba akhulule ukukhathala kungenziwa yasetshenziswa njengomuthi wokuqinisa nokuhlanza ezinhle.
Ukuze bakwazi ukuzilungiselela ekhaya, ezifana ayo ngaphansi anomoya-mpilo, udinga ukuthenga kokteyler ekhethekile. Kugcine uxhumeke ihabhu, ngemva kwalokho-ke kuthululwe isisekelo liquid. Lapho ithuluzi womsebenzi zokugcina elicwile-mpilo Bubbles. Isetshenziselwa ukulungiswa cocktail kuyadingeka Yiqiniso, kumasayiraphu zemvelo kuphela nesiphuzo.
Ukuthatha-mpilo cocktail enziwe isikhungo, noma ukuphefumula umoya-mpilo ukugeleza eyenziwe lezi amadivaysi, yebo, ewusizo. Kodwa ingabe kufanele yenziwe yini, njalo ngokuqondene ngesilinganiso. Ngokuvamile, ngeke ukwazi ukusebenzisa i-hub. Kungcono ngaphambi kokufaka isicelo futhi uye kudokotela uyofuna icebiso futhi uthole izincomo. Abagxeki lezi zinsimbi kubhekwa ukuthi ngaphezu oxygen bangakwazi idlule izihlungi ngokwabo futhi carcinogens ezihlukahlukene obuningi eziqukethwe uzibona emadolobheni nasemazweni anamuhla.
Ukuthengwa imishini njengomoya-mpilo concentrator ukusetshenziswa ekhaya, kungaba nengxenye impilo wonke amalungu omkhaya. Lezi amadivayisi ngempela eqolo. Ngakho-ke, lapho ukhetha kubo qiniseka unake hhayi kuphela nemingcele ezifana umkhiqizo, ukugeleza komoya-mpilo saturation futhi izinhlangothi. Qiniseka ukubheka umakhi. Idivayisi, oluqanjwe inkampani engaziwa, esikhundleni ukusetshenziswa kungabangela umonakalo ongalungiseki impilo.
D-dimer - kuyini? Ngayiphi izifo kudingeka uthathe azihlole?
Cellulite: Ukwelashwa ekhaya
Uhlelo ezalayo: sifo. Female uhlelo zokuzala. Imiphumela utshwala ngesikhathi kwenzeka lokhu besilisa uhlelo zokuzala
Amasosha omzimba Human nokudla ngendlela efanele
Imiphumela ESR ukuhlaziywa ngcono. Kusho ukuthini lokhu?
Ezinemibala powder izinwele: indlela okufanele uwukhethe nokuthi ukuyisebenzisa? ubuhle umkhakha Modern
Tincture cranberry. uzilungiselele
Inkosazana Russian kanye German Duchess Ekaterina Ivanovna Romanova
Yokusetshenziswa "retinol acetate" - kusho dermatoprotektornogo